तपाईंको आजको राशिफल/ वि.सं. २०७५ साल भदौ १३ गते, बुधबार। | Ekhabar Nepal
तपाईंको आजको राशिफल/ वि.सं. २०७५ साल भदौ १३ गते, बुधबार।
धार्मिक भाद्र १३ २०७५ ekhabarnepal
वि.सं. २०७५ साल भदौ १३ गते। बुधबार। इश्वी सन् २०१८ अगस्ट २९ तारिख। नेपाल संवत् ११३८ गुँलागा। भाद्र कृष्णपक्ष। तिथि– तृतीया,
अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपरे पनि मिहिनेतको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ।आफ्ना कमजोरीबाट लाभ उठाउनेहरू सक्रिय हुने हुँदा सावधान रहनुपर्ला। आफ्नै बेहोसीले नोक्सान पुर्याउन सक्छ। घरखर्च बढ्नुका साथै अर्थ अभावले सताउने देखिन्छ। तापनि विदेश भ्रमणका लागि प्रयत्न गर्ने समय छ। बुद्धिको उपयोगले फाइदा उठाउन सकिनेछ।
मिहिनेतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्। लाभको अवसर मिले पनि तत्काल फाइदा लिँदा भविष्यको नाफा गुम्न सक्छ। काम सम्पादन भए पनि तत्काल आम्दानीको आशा नराख्नुहोला। विश्वासपात्रले अन्त्यमा धोका दिन सक्छन्। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दु:ख पाइनेछ। पछि फाइदा हुने काम भने प्रारम्भ गर्न सकिनेछ।
सामाजिक जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ।कामको सन्दर्भमा साझेदार व्यक्तिहरूसँग मतभेद देखापर्न सक्छ। तापनि दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। विशेष भेटघाटले अवसर पनि दिलाउनेछ। तारिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ। अवसरका लागि केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। महँगा र विलासी साधन जोड्ने समय छ।
सामाजिक दायित्व बढ्नेछ।विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् भने भाग्यले नाम र प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ। साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ। राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। धेरैले आफ्ना कामको तारिफ गर्नेछन्। भौतिक साधन जुट्नाले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सफल भइनेछ।
आम्दानी रोकिनाले योजना स्थगन हुन सक्छ। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमल बढ्न सक्छ। गोपनीयता बाहिरिनाले पनि केही समस्या आइपर्ला। काम बिग्रने भयले सताउनेछ भने न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ला। पछिको फाइदाका लागि केही त्याग वा लगानी गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला।
वसायमा मनग्गे आम्दानी हुनेछ। दिन लाभदायक र मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। प्रियजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। अतिथिको रूपमा सत्कार पाइनेछ। आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। व्यतर बेसुरमा दिइएको वचनले समस्या निम्त्याउन सक्छ। घरायसी आवश्यकता बढ्नाले अर्थसञ्चितिमा बाधा पर्न सक्छ।
विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू सजिलै पछि पर्नेछन्। पुरुषार्थले समाजमा स्थापित गराउन सक्छ। रोकिएका काम बन्नाले मनग्गे लाभ हुनेछ। चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ। तर गोपनीयता बाहिरिनाले अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ। परिस्थिति अनुकूल रहे पनि भौतिक सुविधाले खर्च निम्त्याउन सक्छ।
समयले साथ दिनेछ भने प्रयत्न गरेका काम सजिलै सम्पादन हुनेछन्। अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ। प्रतीक्षा गरिएको नतिजा सबल रहनेछ। सन्तान वा अनुयायीले साथ दिनेछन्।
केही असमझदारी देखिए पनि टाढिएका आफन्तहरू नजिकिनेछन्।आज विशेष वस्तु घरमा भित्र्याउने समय छ, जसले परिवारमा खुसी र उत्साह ल्याउनेछ। केही कामको प्रक्रिया दोहोर्याउनुपरे पनि अन्तत: आफैंलाई फाइदा हुनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आउनेछ। राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ।
मिहिनेतले दिगो फाइदा दिलाउन सक्छ। नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। पहिलेको उपलब्धिले उत्साह जगाउनेछ। दाजुभाइमा आत्मीयता बढ्नेछ भने प्रेम र मित्रताको बन्धनसमेत कसिनेछ। व्यवसायमा मनग्गे धनलाभ हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूले लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिति निम्त्याउन सक्छन्।
नियमित काम सम्पादन हुनेछन्। केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपरे पनि मिहिनेत गर्दा फाइदै हुनेछ। बोलीको प्रभावले काम सम्पादन गर्ने समय छ। लेखन तथा अभिव्यक्ति कलामा पनि निखारता आउनेछ। तर परिबन्धले समस्या निम्त्याउने हुँदा योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। आलोचकहरूलाई व्यवहारले समेट्ने प्रयास गर्नुहोला।
आफ्नो सूचना बाहिरिन सक्छ, गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। मिहिनेत गर्दा लक्ष्यमा पुगिनेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। विशेष जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। सानो प्रयत्नले धेरैको भलाइ गर्न सक्छ। भेटघाटले काम गर्ने अवसर दिलाउनेछ। समाजमा तारिफयोग्य काम गर्दै राम्रो उपलब्धि हातपार्न सकिनेछ। शंका गर्ने बानीले काममा पछि परिनेछ।